” အင်းစိန်ထောင် အတွင်း မှ ပရလောကသားများ ” ( ဖြစ်ရပ်မှန် အပိုင်း – ( ၁၅ ) ) – Na Pann San
Na Pann San W | March 27, 2020 | Knowledge | No Comments
မနှင်းဆီ အတွက် အမျှမဝေပါနဲ့.. အစ်ကို….
မနှင်းဆီ ရဲ့ ထိတ်လန့်ကြေကွဲ စရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက် ကို ကြားပြီးတဲ့ နောက် ခင်ပွန်းဖြစ် တဲ့ ကိုဝင်းမြင့် လည်း ရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတယ် ။ အ ဆောင် တစ်ဆောင်လုံးက အကျဉ်းသားတွေ ကလည်း ကိုဝင်းမြင့် ကို သနားနေ ကြတယ် ။
ကိုဝင်းမြင့် လက်ရှိ အခြေအနေ ထက် ပိုဆိုး မသွားအောင် အခန်းလူကြီး ကျော်မြင့် က နှစ်သိမ့် ဖျောင်းဖျ ထားလို့ သာ တော်တော့တယ် ။ ကိုဝင်းမြင့် က ငိုရလွန်းလို့ နီရဲနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ သူ့မိန်းမရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးကို ထုတ်ထုတ်ကြည့်တယ်။ သူ့ဘေး နားမှာ နေတဲ့ အချုပ်သားတွေကလည်း မနှင်းဆီ ရဲ့ ပုံပန်း သဏ္ဌာန်ကို အရမ်းမြင်ချင်နေတော့ ကိုဝင်းမြင့် ထုတ် ထုတ်ကြည့်တုန်း ဘေးကနေ ခိုးကြည့်ကြတယ်။ မနှင်း ဆီက ဧရာဝတီတိုင်းသူ ကရင်လူမျိုးဆိုတော့ အသား ဖြူတယ် ။
ခန္ဓာကိုယ် တောင့်တင်းတယ်။ မျက်နှာက ရုပ်ရှင်မင်းသမီး စံရှားတင်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတယ်။ အခုလို အရွယ်ကောင်းမှာ မထင်မှတ်ဘဲ ကားတိုက်သေ သွားတဲ့အတွက် ကိုဝင်းမြင့်မပြောနဲ့ ဘေးလူတွေတောင် ယူ ကျုံးမရဖြစ်ကြရတယ်။
နောက်တစ်နေ့မနက် ထမင်းစားကြတော့ အခန်းထဲကလူတွေက ကိုဝင်းမြင့်ကို စာနာ တဲ့အနေနဲ့ သူတို့စားတဲ့ ဟင်းကောင်း ဟင်းခွက်တွေ ပို့ပေး တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုဝင်းမြင့်က မစားနိုင်ပါဘူး။ထမင်းမဝင် ရင် လဲသွားမှာစိုးလို့ ကိုကျော်မြင့်က ဇွတ်စားခိုင်းတယ်။ ကိုဝင်းမြင့်က ရုံးထုတ်မှာ မနှင်းဆီပေးခဲ့တဲ့ ထောင်ဝင်စာ ထုပ်ကို သာကြည့် ရင်း မျက်ရည်ကျနေသေးတယ်။
ကိုကျော် မြင့်တို့ ထမင်းဝိုင်းမှာ လူငါးယောက်ရှိတယ်။ အခန်း လူကြီး ကိုကျော် မြင့်ရယ်၊ အခန်းစာရေး ကိုဝင်းမြင့်ရယ်၊ အခြား တောက်တိုမည်ရ အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ တောင်ဥက္ကလာက ချဲရောင်း တဲ့ဇန်မြင့်ရယ်၊ ဟင်းချက်ပေးတဲ့ ဖိုထဲက ဇော်ဝင်းချစ်ရယ်၊ ဘုရားလူကြီး ဦးချင်းရယ် အတူ တူ စားကြတယ်။
ထောင်ဝေါဟာရနဲ့ ပြောရရင် “ အိုးစား” တွေပေါ့။ အချုပ်သားအားလုံး ထောင်ရှေ့စြင်္ကံလမ်းပေါ်မှာ ထမင်းခွက် တွေ ဟင်းခွက်တွေချပြီး စားကြရပေမယ့် လူလိမ် ဝိဇ္ဇာကျော်မြင့်က အခန်းလူကြီးဆိုတဲ့ အရှိန်အဝါရှိတော့ အခန်းထဲမှာ စားကြတယ်။
အဲဒီနေ့က ဟင်းခွက်တွေကတော့ လေးငါးရှစ်မျိုးပါပဲ။ ကိုဝင်းမြင့်က ထမင်းကို စိတ်မပါ လက်မပါ လက်နဲ့ချေနေ ရင်းက အမှတ်တမဲ့ ဘေးဝိုင်းက ပို့ပေးတဲ့ ဝက်ဆီဖတ်ဟင်းကို လှမ်းခပ်လိုက်တယ်။
အဲဒီအချိန် မှာပဲ ဗြုန်းဆို သူ့လက်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ပုတ်ချလိုက်တဲ့အတိုင်း ဟင်းတွေ ဖျာပေါ်ကိုကျသွားတယ်။ ဦးချင်းက ဟင်း တွေကလက်နဲ့ဖယ်ရင်း ကိုဝင်းမြင့်ကို လှမ်းပြောတယ်။
“ရတယ် ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ စားစား ဝင်းမြင့်”
ကိုဝင်းမြင့်လည်း ဝိုင်းသားတွေကို အားနာသွားပြီး ကြက်သားနဲ့ ဂေါ်ဖီရောကြော်ထားတဲ့ အစိမ်း ကြော်ကို လှမ်းနှိုက်လိုက်ပြန်တယ်။
ဒီတစ်ခါမှာလည်း ကိုဝင်းမြင့်လက်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်က လှမ်းကန်လိုက်သလို ခါထွက်သွားပြီး အစိမ်းကြော်ပန်းကန်လည်း မှောက်သွားတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် အားလုံး အံ့အားသင့်ပြီး ကြောင်နေကြ တယ်။
ကိုကျော်မြင့် မျက်နှာတစ်ချက် ပျက်သွားပေမယ့် ဣန္ဒေဆြည်လိုက်တယ်။ မှောက်သွားတဲ့ ဟင်းတွေကို ဇန်မြင့်က တံမြက်စည်းယူပြီး လှည်းကျင်းသန့်ရှင်းလိုက်တယ်။ ကိုဝင်းမြင့်ကလည်း တခြားဟင်းတွေ မနှိုက်တော့ဘူး။
မနှင်းဆီပေးခဲ့တဲ့ ထောင်ဝင်စာထုပ်ထဲက ဘာလချောင်ကြော်နဲ့ပဲ ထမင်းကိုနယ်ပြီး စားလိုက်တယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး။
ညနေဘက်ရောက်တော့ ကိုကျော်မြင့်အခန်းမှာ အခန်းလူကြီးတချို့ အစည်းအဝေးလုပ်တယ်။ ဒီ အစည်းအဝေးကို ၁ ဆောင်မှာရှိတဲ့ ဘုရားဝင်းထဲက လူကြီးတွေကိုလည်းဖိတ်တယ်။
သူတို့အစည်းအဝေး လုပ်ပြီးတော့ ကိုဝင်းမြင့်ကို ခေါ်ပြောတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မနှင်းဆီက အစိမ်းသေ သေတာဆိုတော့ ထောင် ထဲမှာ ဆွမ်းကျွေးတရားနာလေး လုပ်ဖို့နဲ့ အမျှအတမ်းပေးဝေပြီး ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ဖို့ လုပ်ကြမယ်ပေါ့။
လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးကိုလည်း အခန်းသားတွေ လှူဒါန်းငွေနဲ့ စီစဉ်မယ်လို့ ကိုကျော်မြင့်က အသိပေးလိုက် တယ်။ ကိုဝင်းမြင့်ကလည်း သူ့ဇနီးအတွက် ထောင်က ဝိုင်းဝန်းကူညီတာဖြစ်လို့ ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံပါ တယ်။
ဒါကြောင့် နောက်တစ်နေ့ ဘုရားဝင်းထဲမှာ ဆွမ်းကျွေး၊ တရားနာဖို့ စီစဉ်ထားတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင် ဆိုင် ၁ ဆောင်မှာ ဒေါ်လာမှုနဲ့ အထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးလည်း ရောက်နေတယ်။ ဒီဘုန်းကြီး ကို ဆွမ်းကပ်ဖို့ စီစဉ်တယ်။
ကိုဝင်းမြင့်က ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန် ဝိုင်းဝန်းကူညီဖေးမကြတဲ့ ထောင်သားတွေ ကို ကျေးဇူး အထပ်ထပ် အခါခါ တင်နေတော့တယ်။ ညဘက်ရောက်တော့ ထောင်ဝါဒါနဲ့ မှာလိုက်တဲ့ပစ္စည်း တွေ ရောက်လာတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေကတော့ အချိုမှုန့်ထုပ်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်ထုပ်၊ ပုစွန်ခြောက်မှုန့်ထုပ်၊ ဂေါ်ဖီ၊ ပဲသီး စတာတွေပါပဲ။
ပြီးတော့ အချိုပွဲအတွက် ကိတ်မုန့်နဲ့ ဘီစကွတ်ထုပ်တွေ ပါလာသေးတယ်။ အမှန် တကယ်ဆိုရင် ထောင်ကြီး ဗူးဝကနေ ဒီပစ္စည်းတွေကို ထောင်ထဲသယ်ခွင့်မရှိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ကိုဝင်းမြင့် သတင်းကို တစ်ထောင်လုံးက သိနေလို့ သူ့ဇနီးအတွက် ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာကို မသိချင်ယောင် ဆောင်ပြီး ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေကို မနက် ဖိုကြီးဆင်းတဲ့ အကျဉ်းသားတွေနဲ့ ထည့်ပေးပြီး ဟင်းချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမြင့်ကတော့ ဘယ်သူနဲ့မှ စကားမပြောဘဲ အချုပ်ခန်းသံတိုင် ကိုမှီပြီး အဝေးကိုငေးနေတယ်။ သူနဲ့ မနှင်းဆီ အခုလို သေကွဲ ကွဲရမယ်လို့ ဘယ်တုံးကမှ မတွေးမိခဲ့ပါဘူး။
အင်မတန် ငြိမ်းချမ်းပြီး ပူပန်သောကမရှိတဲ့ သူတို့ဘဝထဲကို မစန်းဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဝင်လာပြီး မှ အခုလို ကြေကွဲစရာတွေ ကြုံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မနှင်းဆီ မကွယ်လွန်ခင် တစ်ပတ်လောက်က သူ့ကို ထူးထူးခြားခြား ပြောခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။
အခု မဆီမဆိုင် အဲဒါကို ကိုဝင်းမြင့် အမှတ်ရနေတယ်။ မနှင်းဆီက သူတို့ကလေးရဖို့အတွက် ဧရာဝတီတိုင်းကိုပြန်ပြီး သူ့ရဲ့ရွာမှာ နတ်စားရမယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ရွာကိုသွားရင် ရုံးကိုခွင့်ယူပြီး လိုက်ခဲ့ရမယ်လို့ ကိုဝင်းမြင့်ကို မှာခဲ့ဖူးတယ်။
တကယ်လို့များ အခုလို အဖြစ် ဆိုးနဲ့မကြုံရင် သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ ဝါးခယ်မမြို့က ခလောက်သိုက်ရွာကို အခုအချိန် နတ်စားဖို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရောက်နေလောက်ပြီလို့ အောက်မေ့နေမိတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ည ၉နာရီ သံချောင်းခေါက်တော့ ကိုဝင်းမြင့် ပင်ပန်းပြီး အိပ်ပျော်သွားတယ်။ တစ်ထောင်လုံးမှာလည်း ဘာယာတွေရဲ့ သတင်းပို့သံကလွဲပြီး အားလုံး တိတ်ဆိတ်သွားတယ်။
ညသန်းခေါင်ယံရောက်တော့ ကိုဝင်းမြင့် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေရာကနေ လန့်နိုးသလို ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိပ်တစ်ဝက် နိုးတစ်ဝက်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာ သူ့လက်မောင်းပေါ်ကို နွေးခနဲ အထိ အတွေ့တစ်ခု ခံစားလိုက်ရတယ်။ ဒါကြောင့် မျက်လုံးဖွင့်ပြီးကြည့်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် မျက်ခွံက တအားလေး ပင်နေပြီး ဖွင့်လို့မရဘူး။
စကားပြောဖို့ ကြိုးစားတော့လည်း ရင်ဘတ်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်က လက်နဲ့ဖိထား သလို ဖြစ်နေလို့ စကားပြောလို့ မရပြန်ဘူး။ ဒီအချိန်မှာပဲ သူ့နားအဝကို လေတိုးသံလေးနဲ့ ပြောနေသံ ကြားလိုက်ရတယ်။ အသံကို ကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာ ကိုဝင်းမြင့် ကြက်သီးမွေးညင်း ထသွားတယ်။
ဒီအသံ က သူတစ်သက်မမေ့နိုင်တဲ့အသံ။ ညတိုင်း သူ့ဘေးနားမှာ ကြားခဲ့ရတဲ့ မနှင်းဆီရဲ့အသံ။ အခုတော့ မနှင်းဆီရဲ့ အသံက ဝမ်းနည်းကြေကွဲပြီး ငိုသံပါနေတယ်။
“အစ်ကို ညီမ တောင်းပန်ပါတယ်။ နှင်းဆီတောင်းပန်ပါတယ်။ မနက်ဖြန်ကျရင် နှင်းဆီအတွက် ဆွမ်းသွတ်ကြမှာကို သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှင်းဆီကို သနားရင် အမျှမဝေပါနဲ့ အစ်ကို”
မနှင်းဆီရဲ့ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ကိုဝင်းမြင့် လန့်သွားတယ်။ မနှင်းဆီပြောတာကို လက်မခံဘူးလို့ ပြောဖို့ကြိုးစားပေမယ့် နှုတ်ခမ်းတွေက လှုပ်လို့မရဘူး။ တစ်စုံတစ်ရာ လေးလေးပင်ပင် ချုပ်ကိုင်ထားတယ်။
ဒါကြောင့် ခေါင်းခါပြီး အမူအရာနဲ့ ပြဖို့ ကြိုးစားတယ်။ မနှင်းဆီကတော့ မျက်ရည်တွေ ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကြ ပြီး သူ့ကို ဆက်တောင်းပန်နေတယ်။
“မနှင်းဆီ သေတော့ အမေတို့ရှိတဲ့ ခလောက်သိုက်ရွာကို သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရွာက အဝင်မခံဘူး။ အစ်ကို့ကိုလည်း မခွဲနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် အစ်ကိုရှိတဲ့ အင်းစိန်ထောင်ကိုပဲ လိုက်လာတာ”
ကိုဝင်းမြင့် ဝူးဝူးဝါးဝါး အသံတွေ အခန်းထဲမှာ ပေါ်ထွက်လာတယ်။ ညသန်းခေါင်ယံဆိုတော့ အခန်း ထဲကလူတွေ လန့်ပြီး နိုးလာကြတယ်။ ကိုဝင်းမြင့်က မျက်လုံးကြီး စုံမှိတ်ပြီး ခေါင်းကို ခါယမ်းနေဆဲပါပဲ။ မနှင်းဆီကလည်း ဆက်ပြောတယ်။
“အစ်ကို နှင်းဆီတို့ နတ်စားမသွားခဲ့ရဘူးနော်။ ဒါကြောင့် ခိုက်တာ၊ ဝမ်းမနည်းနဲ့။ အခု နှင်းဆီကို သနားရင် ကွမ်းတစ်ရာ လောက်ကျွေးပါ အစ်ကိုရယ်”
ကိုဝင်းမြင့်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကြောင့် ဘေးမှာရှိတဲ့ ဦးချင်းနဲ့ အခြားလူတွေက လှုပ်နှိုးကြတယ်။
“ဟေ့ကောင် ဝင်းမြင့် ထစမ်း ထစမ်း သတိထားစမ်း”
ပြောပြောဆိုဆို ဦးချင်းက အခန်းရှေ့က ဘုရားစင်မှာ ပူဇော်ထားတဲ့ ရေတော်ခွက်ကိုယူပြီး အဲဒီထဲ က ရေနဲ့ ဝင်းမြင့်မျက်နှာကို ပက်လိုက်တယ်။
အတော်ကြာမှ ကိုဝင်းမြင့် သတိလည်လာပြီး တစ်ခန်းလုံးကို ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့ ဦးချင်းရဲ့ ဒူးခေါင်းကိုကိုင်ပြီး အရူးတစ်ယောက်လို အော်ဟစ်တော့တယ်။
“မလုပ်ပါနဲ့ မနက်ဖြန် သူ့အတွက် ဆွမ်းမကျွေးပါနဲ့။ သူ့မှာ နေစရာမရှိဘူး။ ကျွန်တော်နဲ့ သူ့ကိုမခွဲ ပါနဲ့”
အခန်းလူကြီး ကျော်မြင့်က ဘေးအခန်းတွေ သတိမထားမိအောင် ဝင်းမြင့်ပါးစပ်ကို လက်နဲ့ပိတ် လိုက်တယ်။
“သိပ်မအော်နဲ့ ဝင်းမြင့်၊ ထောင်ပိုင်သိသွားရင် မင်း တိုက်ပိတ်ခံရလိမ့်မယ်”
ကျော်မြင့်စကားအဆုံးမှာ ဝင်းမြင့်ကတော့ ဝူးဝူးဝါးဝါး အော်နေဆဲပါပဲ။ အတန်ကြာမှ အားကုန်ခန်း သွားသလို ငြိမ်ကျသွားတယ်။ ပြီးတော့ မျက်ရည်တွေနဲ့ ကျော်မြင့်ကို လက်အုပ်ချီပြီး တိုးလျှိုးတောင်းပန် တယ်။
“ခုနက မနှင်းဆီ လာသွားတယ်။ သူက တရားမနာဖို့နဲ့ အမျှမဝေဖို့ လာပြောသွားတယ်”
“ဟာကွာ မဟုတ်တာ။ ဆွမ်းမကျွေးရင် ကောင်းရာမွန်ရာဘဝကို ဘယ်ရောက်မလဲကွာ။ ပြီးတော့ သူ ကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူး”
ကျော်မြင့် ဘယ်လိုပဲ ဖျောင်းဖျပြောပြော ဝင်းမြင့်က ခေါင်းပဲ ခါယမ်းနေတယ်။
“သူ့ရွာကလည်း လက်မခံဘူး။ ကျွန်တော် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ကျွန်တော့်မိန်းမကို သနားတယ်။ သူ့မှာ နေစရာမရှိဘူး။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ခွဲလည်း မခွဲနိုင်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် မနက်ဖြန် အမျှမဝေပါနဲ့ လားဗျာ”
၀င်းမြင့်ရဲ့ တောင်းပန်သံက တိတ်ဆိတ်တဲ့ အခန်းထဲမှာ အချုပ်သားအားလုံး ကြားနေရတယ်။ အချို့က ဝင်းမြင့်ကို တော်တော်သနားနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများစုက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်နေတော့ ဝင်းမြင့်ပြောတာကို မလိုက်လျောချင်ကြပါဘူး။
သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ သံယောဇဉ်ကို စာနာ နားလည်ပေမယ့် ဘဝချင်းမတူတော့တဲ့အတွက် ဝင်းမြင့်နဲ့ မနှင်းဆီကို အဆက်ဖြတ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အသည်းအသန် တောင်းပန်နေတဲ့ ဝင်းမြင့်ကြောင့် ဘယ်သူကမှ လက်မခံကြောင်း မပြောတော့ဘူး။ အချင်းချင်း မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲပြပြီး ခေါင်းညိတ်လိုက်ကြတယ်။
၀င်းမြင့်ကိုတော့ ထပ်ပြီး အော်ကြီးဟစ် ကျယ်မဖြစ်ဖို့ အခန်းသားတစ်ယောက်ဆီက အိပ်ဆေးတောင်းပြီး တိုက်လိုက်တယ်။ ဝင်းမြင့်ကတော့ အရူး တစ်ယောက်လို တတွတ်တွတ်နဲ့ ရေရွတ်နေတုန်းပါပဲ။
“မနှင်းဆီကို အမျှမပေးပါနဲ့။ နှင်းဆီကို အမျှမပေးပါနဲ့။ နှင်းဆီကို အမျှမပေးပါနဲ့”
နောက်တော့ ဝင်းမြင့်လည်း ဆေးအရှိန်ကြောင့် အိပ်ပျော်သွားတယ်။ အခန်းလူကြီး ကျော်မြင့်က တော့ ဦးချင်းကို တိုင်ပင်ပြီး မနက် ၄ နာရီ ဖိုကြီးမှာ အလုပ်ဆင်းရမယ့် အချုပ်သားပါကြီးလက်ထဲကို ဆွမ်း ကပ်မယ့် ဟင်းထုပ်တွေ ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ဦးချင်းကလည်း အခန်းလူကြီးနဲ့ တိုင်ပင်ကြီး မနက်ဖြန်မှာ မနှင်းဆီအတွက် မဖြစ်မနေ ဆွမ်းကပ်ပြီး အမျှဝေဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မနှင်းဆီ(ခ) ကရင်မဟာ သူ့ယောက်ျား ကိုဝင်းမြင့်ကို စွဲလမ်းလွန်းလို့ သေတာတောင် မကျွတ်ဘဲ ရောက်လာတာကို အားလုံးသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ ဦးချင်းဆိုတာကလည်း သစ်မှုနဲ့ အချုပ်ကျနေပေမယ့် ဘာသာရေးလိုင်း မှာတော့ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရှိတယ်။
သူ့ကို ၁ ဆောင်မှာ ဝင်ပူးထွက်ပူး ဦးချင်းလို့ခေါ်တယ်။ သူက နေ့စဉ် ဘုရားဝင်းထဲမှာနေပြီး ဘုရားဝေယျာဝစ္စနဲ့ ဘာသာရေးကိစ္စတွေပဲ လုပ်တယ်။ သူပြောတဲ့ တရားထဲမှာ ဝိသာခါကျောင်းအမကြီး တရားက အချုပ်သားတွေ သဘောကျကြတယ်။
သူပြောလေ့ရှိတာက ဝိသာခါ ကျောင်းအမကြီးဟာ ဝက်မဘ၀ ဖြစ်ခဲ့စဉ်က ကိလေသာကို စိတ်ကုန်လွန်းလို့ ဝက်သိုးတွေ အန္တရာယ်က ထွက်ပြေးခဲ့တာတောင် ဝဋ်ကြွေးမကုန်လို့ ဝါးရုံပင်ကြား ခေါင်းညပ်ပြီး ဝက်သိုးတွေရဲ့ မေထုံမှီဝဲခြင်းကို ခံခဲ့ရ တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ခဏ ခဏ ပြောတယ်။ အခု ကိုဝင်းမြင့်နဲ့ မနှင်းဆီဇာတ်လမ်းကို ဦးချင်း ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာ တစ်ဆောင်လုံးက စိတ်ဝင်စားနေတယ်။
အခန်းလူကြီး ကျော်မြင့်ကလည်း ဝင်းမြင့် ကျေနပ်အောင် အမျှမဝေဘူးလို့ ပြောထားပေမယ့် နောက်တစ်နေ့မှာ တရားနာပြီး အမျှဝေဖို့ စီစဉ်ထား တယ်။ ဒါဆိုရင် မနှင်းဆီလည်း ကျွတ်လွတ်သွားပြီး ကောင်းရာမွန်ရာဘဝကို ရောက်သွားမယ်လို့ အားလုံး ယုံကြည်ထားကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၁ ဆောင် ဘုရားဝင်းမှာ အဲဒီနေ့က တကယ်အမျှဝေလိုက်တော့. . . . . . . . . . . ။
မနှငျးဆီ အတှကျ အမြှမဝပေါနဲ့.. အဈကို….
မနှငျးဆီ ရဲ့ ထိတျလနျ့ကွကှေဲ စရာကောငျးတဲ့ အဖွဈအပကျြ ကို ကွားပွီးတဲ့ နောကျ ခငျပှနျးဖွဈ တဲ့ ကိုဝငျးမွငျ့ လညျး ရူးကွောငျကွောငျဖွဈသှားတယျ ။ အ ဆောငျ တဈဆောငျလုံးက အကဉျြးသားတှေ ကလညျး ကိုဝငျးမွငျ့ ကို သနားနေ ကွတယျ ။
ကိုဝငျးမွငျ့ လကျရှိ အခွအေနေ ထကျ ပိုဆိုး မသှားအောငျ အခနျးလူကွီး ကြျောမွငျ့ က နှဈသိမျ့ ဖြောငျးဖြ ထားလို့ သာ တျောတော့တယျ ။ ကိုဝငျးမွငျ့ က ငိုရလှနျးလို့ နီရဲနတေဲ့မကျြလုံးတှနေဲ့ သူ့မိနျးမရဲ့ ဓာတျပုံလေးကို ထုတျထုတျကွညျ့တယျ။ သူ့ဘေး နားမှာ နတေဲ့ အခြုပျသားတှကေလညျး မနှငျးဆီ ရဲ့ ပုံပနျး သဏ်ဌာနျကို အရမျးမွငျခငျြနတေော့ ကိုဝငျးမွငျ့ ထုတျ ထုတျကွညျ့တုနျး ဘေးကနေ ခိုးကွညျ့ကွတယျ။ မနှငျး ဆီက ဧရာဝတီတိုငျးသူ ကရငျလူမြိုးဆိုတော့ အသား ဖွူတယျ ။
ခန်ဓာကိုယျ တောငျ့တငျးတယျ။ မကျြနှာက ရုပျရှငျမငျးသမီး စံရှားတငျနဲ့ ခပျဆငျဆငျတူတယျ။ အခုလို အရှယျကောငျးမှာ မထငျမှတျဘဲ ကားတိုကျသေ သှားတဲ့အတှကျ ကိုဝငျးမွငျ့မပွောနဲ့ ဘေးလူတှတေောငျ ယူ ကြုံးမရဖွဈကွရတယျ။
နောကျတဈနမေ့နကျ ထမငျးစားကွတော့ အခနျးထဲကလူတှကေ ကိုဝငျးမွငျ့ကို စာနာ တဲ့အနနေဲ့ သူတို့စားတဲ့ ဟငျးကောငျး ဟငျးခှကျတှေ ပို့ပေး တယျ။ ဒါပမေဲ့ ကိုဝငျးမွငျ့က မစားနိုငျပါဘူး။ထမငျးမဝငျ ရငျ လဲသှားမှာစိုးလို့ ကိုကြျောမွငျ့က ဇှတျစားခိုငျးတယျ။ ကိုဝငျးမွငျ့က ရုံးထုတျမှာ မနှငျးဆီပေးခဲ့တဲ့ ထောငျဝငျစာ ထုပျကို သာကွညျ့ ရငျး မကျြရညျကနြသေေးတယျ။
ကိုကြျော မွငျ့တို့ ထမငျးဝိုငျးမှာ လူငါးယောကျရှိတယျ။ အခနျး လူကွီး ကိုကြျော မွငျ့ရယျ၊ အခနျးစာရေး ကိုဝငျးမွငျ့ရယျ၊ အခွား တောကျတိုမညျရ အလုပျတှလေုပျဖို့ တောငျဥက်ကလာက ခြဲရောငျး တဲ့ဇနျမွငျ့ရယျ၊ ဟငျးခကျြပေးတဲ့ ဖိုထဲက ဇျောဝငျးခဈြရယျ၊ ဘုရားလူကွီး ဦးခငျြးရယျ အတူ တူ စားကွတယျ။
ထောငျဝေါဟာရနဲ့ ပွောရရငျ “ အိုးစား” တှပေေါ့။ အခြုပျသားအားလုံး ထောငျရှစေ့င်ျကွံလမျးပျေါမှာ ထမငျးခှကျ တှေ ဟငျးခှကျတှခေပြွီး စားကွရပမေယျ့ လူလိမျ ဝိဇ်ဇာကြျောမွငျ့က အခနျးလူကွီးဆိုတဲ့ အရှိနျအဝါရှိတော့ အခနျးထဲမှာ စားကွတယျ။
အဲဒီနကေ့ ဟငျးခှကျတှကေတော့ လေးငါးရှဈမြိုးပါပဲ။ ကိုဝငျးမွငျ့က ထမငျးကို စိတျမပါ လကျမပါ လကျနဲ့ခနြေေ ရငျးက အမှတျတမဲ့ ဘေးဝိုငျးက ပို့ပေးတဲ့ ဝကျဆီဖတျဟငျးကို လှမျးခပျလိုကျတယျ။
အဲဒီအခြိနျ မှာပဲ ဗွုနျးဆို သူ့လကျကို တဈစုံတဈယောကျက ပုတျခလြိုကျတဲ့အတိုငျး ဟငျးတှေ ဖြာပျေါကိုကသြှားတယျ။ ဦးခငျြးက ဟငျး တှကေလကျနဲ့ဖယျရငျး ကိုဝငျးမွငျ့ကို လှမျးပွောတယျ။
“ရတယျ ဘာမှမဖွဈဘူး။ စားစား ဝငျးမွငျ့”
ကိုဝငျးမွငျ့လညျး ဝိုငျးသားတှကေို အားနာသှားပွီး ကွကျသားနဲ့ ဂျေါဖီရောကွျောထားတဲ့ အစိမျး ကွျောကို လှမျးနှိုကျလိုကျပွနျတယျ။
ဒီတဈခါမှာလညျး ကိုဝငျးမွငျ့လကျကို တဈစုံတဈယောကျက လှမျးကနျလိုကျသလို ခါထှကျသှားပွီး အစိမျးကွျောပနျးကနျလညျး မှောကျသှားတယျ။ ဒီဖွဈရပျကွောငျ့ အားလုံး အံ့အားသငျ့ပွီး ကွောငျနကွေ တယျ။
ကိုကြျောမွငျ့ မကျြနှာတဈခကျြ ပကျြသှားပမေယျ့ ဣန်ဒဆွေညျလိုကျတယျ။ မှောကျသှားတဲ့ ဟငျးတှကေို ဇနျမွငျ့က တံမွကျစညျးယူပွီး လှညျးကငျြးသနျ့ရှငျးလိုကျတယျ။ ကိုဝငျးမွငျ့ကလညျး တခွားဟငျးတှေ မနှိုကျတော့ဘူး။
မနှငျးဆီပေးခဲ့တဲ့ ထောငျဝငျစာထုပျထဲက ဘာလခြောငျကွျောနဲ့ပဲ ထမငျးကိုနယျပွီး စားလိုကျတယျ။ အဲဒီအခါမှာ ဘာမှမဖွဈတော့ပါဘူး။
ညနဘေကျရောကျတော့ ကိုကြျောမွငျ့အခနျးမှာ အခနျးလူကွီးတခြို့ အစညျးအဝေးလုပျတယျ။ ဒီ အစညျးအဝေးကို ၁ ဆောငျမှာရှိတဲ့ ဘုရားဝငျးထဲက လူကွီးတှကေိုလညျးဖိတျတယျ။
သူတို့အစညျးအဝေး လုပျပွီးတော့ ကိုဝငျးမွငျ့ကို ချေါပွောတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ မနှငျးဆီက အစိမျးသေ သတောဆိုတော့ ထောငျ ထဲမှာ ဆှမျးကြှေးတရားနာလေး လုပျဖို့နဲ့ အမြှအတမျးပေးဝပွေီး ကောငျးရာမှနျရာရောကျဖို့ လုပျကွမယျပေါ့။
လိုအပျတဲ့ ငှကွေေးကိုလညျး အခနျးသားတှေ လှူဒါနျးငှနေဲ့ စီစဉျမယျလို့ ကိုကြျောမွငျ့က အသိပေးလိုကျ တယျ။ ကိုဝငျးမွငျ့ကလညျး သူ့ဇနီးအတှကျ ထောငျက ဝိုငျးဝနျးကူညီတာဖွဈလို့ ကကြေနြေပျနပျ လကျခံပါ တယျ။
ဒါကွောငျ့ နောကျတဈနေ့ ဘုရားဝငျးထဲမှာ ဆှမျးကြှေး၊ တရားနာဖို့ စီစဉျထားတယျ။ တိုကျတိုကျဆိုငျ ဆိုငျ ၁ ဆောငျမှာ ဒျေါလာမှုနဲ့ အထိနျးသိမျးခံထားရတဲ့ ဘုနျးကွီးတဈပါးလညျး ရောကျနတေယျ။ ဒီဘုနျးကွီး ကို ဆှမျးကပျဖို့ စီစဉျတယျ။
ကိုဝငျးမွငျ့က ဒုက်ခရောကျတဲ့အခြိနျ ဝိုငျးဝနျးကူညီဖေးမကွတဲ့ ထောငျသားတှေ ကို ကြေးဇူး အထပျထပျ အခါခါ တငျနတေော့တယျ။ ညဘကျရောကျတော့ ထောငျဝါဒါနဲ့ မှာလိုကျတဲ့ပစ်စညျး တှေ ရောကျလာတယျ။ ဒီပစ်စညျးတှကေတော့ အခြိုမှုနျ့ထုပျ၊ ငရုတျသီးမှုနျ့ထုပျ၊ ပုစှနျခွောကျမှုနျ့ထုပျ၊ ဂျေါဖီ၊ ပဲသီး စတာတှပေါပဲ။
ပွီးတော့ အခြိုပှဲအတှကျ ကိတျမုနျ့နဲ့ ဘီစကှတျထုပျတှေ ပါလာသေးတယျ။ အမှနျ တကယျဆိုရငျ ထောငျကွီး ဗူးဝကနေ ဒီပစ်စညျးတှကေို ထောငျထဲသယျခှငျ့မရှိပါဘူး။
ဒါပမေဲ့ ကိုဝငျးမွငျ့ သတငျးကို တဈထောငျလုံးက သိနလေို့ သူ့ဇနီးအတှကျ ကုသိုလျကောငျးမှုလုပျတာကို မသိခငျြယောငျ ဆောငျပွီး ခှငျ့ပွုပေးလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ ဒီပစ်စညျးတှကေို မနကျ ဖိုကွီးဆငျးတဲ့ အကဉျြးသားတှနေဲ့ ထညျ့ပေးပွီး ဟငျးခကျြရမှာဖွဈပါတယျ။
ကိုဝငျးမွငျ့ကတော့ ဘယျသူနဲ့မှ စကားမပွောဘဲ အခြုပျခနျးသံတိုငျ ကိုမှီပွီး အဝေးကိုငေးနတေယျ။ သူနဲ့ မနှငျးဆီ အခုလို သကှေဲ ကှဲရမယျလို့ ဘယျတုံးကမှ မတှေးမိခဲ့ပါဘူး။
အငျမတနျ ငွိမျးခမျြးပွီး ပူပနျသောကမရှိတဲ့ သူတို့ဘဝထဲကို မစနျးဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျ ဝငျလာပွီး မှ အခုလို ကွကှေဲစရာတှေ ကွုံခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။ မနှငျးဆီ မကှယျလှနျခငျ တဈပတျလောကျက သူ့ကို ထူးထူးခွားခွား ပွောခဲ့တဲ့ စကားတဈခှနျးရှိတယျ။
အခု မဆီမဆိုငျ အဲဒါကို ကိုဝငျးမွငျ့ အမှတျရနတေယျ။ မနှငျးဆီက သူတို့ကလေးရဖို့အတှကျ ဧရာဝတီတိုငျးကိုပွနျပွီး သူ့ရဲ့ရှာမှာ နတျစားရမယျလို့ ပွောခဲ့တယျ။ ရှာကိုသှားရငျ ရုံးကိုခှငျ့ယူပွီး လိုကျခဲ့ရမယျလို့ ကိုဝငျးမွငျ့ကို မှာခဲ့ဖူးတယျ။
တကယျလို့မြား အခုလို အဖွဈ ဆိုးနဲ့မကွုံရငျ သူတို့လငျမယားနှဈယောကျဟာ ဝါးခယျမမွို့က ခလောကျသိုကျရှာကို အခုအခြိနျ နတျစားဖို့ ပြျောပြျောရှငျရှငျ ရောကျနလေောကျပွီလို့ အောကျမနေ့မေိတယျ။
ဒီလိုနဲ့ ည ၉နာရီ သံခြောငျးခေါကျတော့ ကိုဝငျးမွငျ့ ပငျပနျးပွီး အိပျပြျောသှားတယျ။ တဈထောငျလုံးမှာလညျး ဘာယာတှရေဲ့ သတငျးပို့သံကလှဲပွီး အားလုံး တိတျဆိတျသှားတယျ။
ညသနျးခေါငျယံရောကျတော့ ကိုဝငျးမွငျ့ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အိပျပြျောနရောကနေ လနျ့နိုးသလို ဖွဈသှားတယျ။ ဒါပမေဲ့ အိပျတဈဝကျ နိုးတဈဝကျဖွဈနတေဲ့အခိုကျမှာ သူ့လကျမောငျးပျေါကို နှေးခနဲ အထိ အတှတေ့ဈခု ခံစားလိုကျရတယျ။ ဒါကွောငျ့ မကျြလုံးဖှငျ့ပွီးကွညျ့ဖို့ ကွိုးစားပမေယျ့ မကျြခှံက တအားလေး ပငျနပွေီး ဖှငျ့လို့မရဘူး။
စကားပွောဖို့ ကွိုးစားတော့လညျး ရငျဘတျကို တဈစုံတဈယောကျက လကျနဲ့ဖိထား သလို ဖွဈနလေို့ စကားပွောလို့ မရပွနျဘူး။ ဒီအခြိနျမှာပဲ သူ့နားအဝကို လတေိုးသံလေးနဲ့ ပွောနသေံ ကွားလိုကျရတယျ။ အသံကို ကွားလိုကျရတဲ့အခါမှာ ကိုဝငျးမွငျ့ ကွကျသီးမှေးညငျး ထသှားတယျ။
ဒီအသံ က သူတဈသကျမမနေို့ငျတဲ့အသံ။ ညတိုငျး သူ့ဘေးနားမှာ ကွားခဲ့ရတဲ့ မနှငျးဆီရဲ့အသံ။ အခုတော့ မနှငျးဆီရဲ့ အသံက ဝမျးနညျးကွကှေဲပွီး ငိုသံပါနတေယျ။
“အဈကို ညီမ တောငျးပနျပါတယျ။ နှငျးဆီတောငျးပနျပါတယျ။ မနကျဖွနျကရြငျ နှငျးဆီအတှကျ ဆှမျးသှတျကွမှာကို သိတယျ။ ဒါပမေဲ့ နှငျးဆီကို သနားရငျ အမြှမဝပေါနဲ့ အဈကို”
မနှငျးဆီရဲ့ တောငျးဆိုမှုကွောငျ့ ကိုဝငျးမွငျ့ လနျ့သှားတယျ။ မနှငျးဆီပွောတာကို လကျမခံဘူးလို့ ပွောဖို့ကွိုးစားပမေယျ့ နှုတျခမျးတှကေ လှုပျလို့မရဘူး။ တဈစုံတဈရာ လေးလေးပငျပငျ ခြုပျကိုငျထားတယျ။
ဒါကွောငျ့ ခေါငျးခါပွီး အမူအရာနဲ့ ပွဖို့ ကွိုးစားတယျ။ မနှငျးဆီကတော့ မကျြရညျတှေ ပိုးပိုးပေါကျပေါကျကွ ပွီး သူ့ကို ဆကျတောငျးပနျနတေယျ။
“မနှငျးဆီ သတေော့ အမတေို့ရှိတဲ့ ခလောကျသိုကျရှာကို သှားတယျ။ ဒါပမေဲ့ ရှာက အဝငျမခံဘူး။ အဈကို့ကိုလညျး မခှဲနိုငျဘူး။ ဒါကွောငျ့ အဈကိုရှိတဲ့ အငျးစိနျထောငျကိုပဲ လိုကျလာတာ”
ကိုဝငျးမွငျ့ ဝူးဝူးဝါးဝါး အသံတှေ အခနျးထဲမှာ ပျေါထှကျလာတယျ။ ညသနျးခေါငျယံဆိုတော့ အခနျး ထဲကလူတှေ လနျ့ပွီး နိုးလာကွတယျ။ ကိုဝငျးမွငျ့က မကျြလုံးကွီး စုံမှိတျပွီး ခေါငျးကို ခါယမျးနဆေဲပါပဲ။ မနှငျးဆီကလညျး ဆကျပွောတယျ။
“အဈကို နှငျးဆီတို့ နတျစားမသှားခဲ့ရဘူးနျော။ ဒါကွောငျ့ ခိုကျတာ၊ ဝမျးမနညျးနဲ့။ အခု နှငျးဆီကို သနားရငျ ကှမျးတဈရာ လောကျကြှေးပါ အဈကိုရယျ”
ကိုဝငျးမွငျ့ရဲ့ အဖွဈအပကျြကွောငျ့ ဘေးမှာရှိတဲ့ ဦးခငျြးနဲ့ အခွားလူတှကေ လှုပျနှိုးကွတယျ။
“ဟကေ့ောငျ ဝငျးမွငျ့ ထစမျး ထစမျး သတိထားစမျး”
ပွောပွောဆိုဆို ဦးခငျြးက အခနျးရှကေ့ ဘုရားစငျမှာ ပူဇျောထားတဲ့ ရတေျောခှကျကိုယူပွီး အဲဒီထဲ က ရနေဲ့ ဝငျးမွငျ့မကျြနှာကို ပကျလိုကျတယျ။
အတျောကွာမှ ကိုဝငျးမွငျ့ သတိလညျလာပွီး တဈခနျးလုံးကို ကွောငျတောငျတောငျနဲ့ ကွညျ့နတေယျ။ ပွီးတော့ ဦးခငျြးရဲ့ ဒူးခေါငျးကိုကိုငျပွီး အရူးတဈယောကျလို အျောဟဈတော့တယျ။
“မလုပျပါနဲ့ မနကျဖွနျ သူ့အတှကျ ဆှမျးမကြှေးပါနဲ့။ သူ့မှာ နစေရာမရှိဘူး။ ကြှနျတျောနဲ့ သူ့ကိုမခှဲ ပါနဲ့”
အခနျးလူကွီး ကြျောမွငျ့က ဘေးအခနျးတှေ သတိမထားမိအောငျ ဝငျးမွငျ့ပါးစပျကို လကျနဲ့ပိတျ လိုကျတယျ။
“သိပျမအျောနဲ့ ဝငျးမွငျ့၊ ထောငျပိုငျသိသှားရငျ မငျး တိုကျပိတျခံရလိမျ့မယျ”
ကြျောမွငျ့စကားအဆုံးမှာ ဝငျးမွငျ့ကတော့ ဝူးဝူးဝါးဝါး အျောနဆေဲပါပဲ။ အတနျကွာမှ အားကုနျခနျး သှားသလို ငွိမျကသြှားတယျ။ ပွီးတော့ မကျြရညျတှနေဲ့ ကြျောမွငျ့ကို လကျအုပျခြီပွီး တိုးလြှိုးတောငျးပနျ တယျ။
“ခုနက မနှငျးဆီ လာသှားတယျ။ သူက တရားမနာဖို့နဲ့ အမြှမဝဖေို့ လာပွောသှားတယျ”
“ဟာကှာ မဟုတျတာ။ ဆှမျးမကြှေးရငျ ကောငျးရာမှနျရာဘဝကို ဘယျရောကျမလဲကှာ။ ပွီးတော့ သူ ကြှတျမှာမဟုတျဘူး”
ကြျောမွငျ့ ဘယျလိုပဲ ဖြောငျးဖပြွောပွော ဝငျးမွငျ့က ခေါငျးပဲ ခါယမျးနတေယျ။
“သူ့ရှာကလညျး လကျမခံဘူး။ ကြှနျတျော ဘယျလိုလုပျရမလဲ။ ကြှနျတေျာ့မိနျးမကို သနားတယျ။ သူ့မှာ နစေရာမရှိဘူး။ ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျ ခှဲလညျး မခှဲနိုငျဘူး။ ဖွဈနိုငျရငျ မနကျဖွနျ အမြှမဝပေါနဲ့ လားဗြာ”
ဝငျးမွငျ့ရဲ့ တောငျးပနျသံက တိတျဆိတျတဲ့ အခနျးထဲမှာ အခြုပျသားအားလုံး ကွားနရေတယျ။ အခြို့က ဝငျးမွငျ့ကို တျောတျောသနားနတေယျ။ ဒါပမေဲ့ အမြားစုက ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှေ ဖွဈနတေော့ ဝငျးမွငျ့ပွောတာကို မလိုကျလြောခငျြကွပါဘူး။
သူတို့လငျမယားနှဈယောကျရဲ့ သံယောဇဉျကို စာနာ နားလညျပမေယျ့ ဘဝခငျြးမတူတော့တဲ့အတှကျ ဝငျးမွငျ့နဲ့ မနှငျးဆီကို အဆကျဖွတျပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ အသညျးအသနျ တောငျးပနျနတေဲ့ ဝငျးမွငျ့ကွောငျ့ ဘယျသူကမှ လကျမခံကွောငျး မပွောတော့ဘူး။ အခငျြးခငျြး မကျြနှာရိပျမကျြနှာကဲပွပွီး ခေါငျးညိတျလိုကျကွတယျ။
ဝငျးမွငျ့ကိုတော့ ထပျပွီး အျောကွီးဟဈ ကယျြမဖွဈဖို့ အခနျးသားတဈယောကျဆီက အိပျဆေးတောငျးပွီး တိုကျလိုကျတယျ။ ဝငျးမွငျ့ကတော့ အရူး တဈယောကျလို တတှတျတှတျနဲ့ ရရှေတျနတေုနျးပါပဲ။
“မနှငျးဆီကို အမြှမပေးပါနဲ့။ နှငျးဆီကို အမြှမပေးပါနဲ့။ နှငျးဆီကို အမြှမပေးပါနဲ့”
နောကျတော့ ဝငျးမွငျ့လညျး ဆေးအရှိနျကွောငျ့ အိပျပြျောသှားတယျ။ အခနျးလူကွီး ကြျောမွငျ့က တော့ ဦးခငျြးကို တိုငျပငျပွီး မနကျ ၄ နာရီ ဖိုကွီးမှာ အလုပျဆငျးရမယျ့ အခြုပျသားပါကွီးလကျထဲကို ဆှမျး ကပျမယျ့ ဟငျးထုပျတှေ ထညျ့ပေးလိုကျတယျ။ ဦးခငျြးကလညျး အခနျးလူကွီးနဲ့ တိုငျပငျကွီး မနကျဖွနျမှာ မနှငျးဆီအတှကျ မဖွဈမနေ ဆှမျးကပျပွီး အမြှဝဖေို့ ဆုံးဖွတျထားတယျ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မနှငျးဆီ(ခ) ကရငျမဟာ သူ့ယောကျြား ကိုဝငျးမွငျ့ကို စှဲလမျးလှနျးလို့ သတောတောငျ မကြှတျဘဲ ရောကျလာတာကို အားလုံးသဘောပေါကျလိုကျတယျ။ ဦးခငျြးဆိုတာကလညျး သဈမှုနဲ့ အခြုပျကနြပေမေယျ့ ဘာသာရေးလိုငျး မှာတော့ နကျနကျရှိုငျးရှိုငျးရှိတယျ။
သူ့ကို ၁ ဆောငျမှာ ဝငျပူးထှကျပူး ဦးခငျြးလို့ချေါတယျ။ သူက နစေ့ဉျ ဘုရားဝငျးထဲမှာနပွေီး ဘုရားဝယြောဝစ်စနဲ့ ဘာသာရေးကိစ်စတှပေဲ လုပျတယျ။ သူပွောတဲ့ တရားထဲမှာ ဝိသာခါကြောငျးအမကွီး တရားက အခြုပျသားတှေ သဘောကကြွတယျ။
သူပွောလရှေိ့တာက ဝိသာခါ ကြောငျးအမကွီးဟာ ဝကျမဘ၀ ဖွဈခဲ့စဉျက ကိလသောကို စိတျကုနျလှနျးလို့ ဝကျသိုးတှေ အန်တရာယျက ထှကျပွေးခဲ့တာတောငျ ဝဋျကွှေးမကုနျလို့ ဝါးရုံပငျကွား ခေါငျးညပျပွီး ဝကျသိုးတှရေဲ့ မထေုံမှီဝဲခွငျးကို ခံခဲ့ရ တယျဆိုတဲ့အကွောငျးကို ခဏ ခဏ ပွောတယျ။ အခု ကိုဝငျးမွငျ့နဲ့ မနှငျးဆီဇာတျလမျးကို ဦးခငျြး ဘယျလို ကိုငျတှယျမလဲဆိုတာ တဈဆောငျလုံးက စိတျဝငျစားနတေယျ။
အခနျးလူကွီး ကြျောမွငျ့ကလညျး ဝငျးမွငျ့ ကနြေပျအောငျ အမြှမဝဘေူးလို့ ပွောထားပမေယျ့ နောကျတဈနမှေ့ာ တရားနာပွီး အမြှဝဖေို့ စီစဉျထား တယျ။ ဒါဆိုရငျ မနှငျးဆီလညျး ကြှတျလှတျသှားပွီး ကောငျးရာမှနျရာဘဝကို ရောကျသှားမယျလို့ အားလုံး ယုံကွညျထားကွတယျ။
ဒါပမေဲ့ ၁ ဆောငျ ဘုရားဝငျးမှာ အဲဒီနကေ့ တကယျအမြှဝလေိုကျတော့. . . . . . . . . . . ။
” အငျးစိနျထောငျ အတှငျး မှ ပရလောကသားမြား ” ( ဖွဈရပျမှနျ အပိုငျး – ( ၁၄ ) )
” အငျးစိနျထောငျ အတှငျး မှ ပရလောကသားမြား ” ( ဖွဈရပျမှနျ အပိုငျး – ( ၁၆ ) )
“ လူတယောက် ပြောင်ပြောင် ရောင်ရောင် နဲ့ အဆင်ပြေပြေ ဖြစ်လာရင် အောက်ဖဲ လှန်ချင်ကြတဲ့ အာသီသ “( တခါတလေ ဒဲ့ပဲပြော တတ်တယ် ကြိုက် ရင် Share )
မုန်တိုင်းပြီး တဲ့နောက် လေပြေ လာသလို ကိုဗစ်ကာလ အလွန် လူသား တို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက် ရောင်နီ လာပြီ
ဘဏ် တွေ မှာ ငွေအပ် ရင် အ တိုး ဘယ်လောက် ရ မှာ လဲ
၀ဋ် . . . တစ် လုံး တည်း ပဲ..ကိုယ့်အလှည့်ရောက်လာတဲ့ အခါ သေမတတ် နာကျင်ခံစားရပါတယ်